Joba 17 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
17 “Lany ny heriko,+ ary tapitra ny androko.Ny fasana no mba anjarako.+ 2 Esoin’ny olona aho,+Ary ny fikomian’izy ireo no ifantohan’ny masoko. 3 Tehirizo any aminao re ny fiantohana ahy e!+Fa iza indray moa no hifandray tanana+ amiko amin’izany? 4 Tsy navelanao ho malina izy ireo.+Izany no antony tsy anandratanao azy. 5 Asainy maka amin’izay ananany ny namany,Nefa ny zanany aza lali-maso.+ 6 Efa nataon’Andriamanitra oha-teny fanarabiana+ ny anarako,Ka lasa ataon’ny olona fandrora ny tarehiko.+ 7 Mihapahina ny masoko noho ny fahoriana,+Ary toy ny aloka sisa ny rantsambatako rehetra. 8 Midanàka ny olo-marina rehefa mahita an’izany,Ary sosotra amin’ny mpivadi-pinoana ny tsy manan-tsiny. 9 Mifikitra amin’ny lalany ny olo-marina,+Ary mihamatanjaka+ ny madio tanana.+ 10 Afaka manohy ny teninareo ianareo rehetra. Koa tohizo àry!Fa tsy hitako izay hendry aminareo.+ 11 Lasa ny androko,+ ary rava ny fikasako,+Eny, ny fanirian’ny foko. 12 Ny alina no ataon’izy ireo ho solon’ny andro,+ ka hoy izy:‘Akaiky ny mazava satria efa maizina izao.’ 13 Raha mbola miandry aho, dia ny Fasana* no ho tranoko,+Ary ao amin’ny haizina+ no hamelarako ny fandrianako. 14 Ny lavaka+ no hantsoiko hoe: ‘Ianao no raiko!’Ary ny olitra,+ hoe: ‘Ianao no reniko sady anabaviko!’ 15 Koa aiza àry ny fanantenako?+Ary iza no mihevitra fa mbola misy azoko antenaina? 16 Ho any amin’ny bara hidin’ny Fasana* izany,Rehefa samy hidina any amin’ny vovoka avokoa izahay.”+